Ungazikhuphela njani iividiyo ze-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 1, 2021 0 IiCententarios 243
Ihlala isenzeka ukubona Kwiintanethi zentlalo ufumana ividiyo ehlekisayo, eyonwabisayo okanye enomdla kwaye ufuna ukuyigcina ukuze ukwazi ukwabelana ngayo, okanye ubukele ngamanye amaxesha?
Kwi-Instagram kunzima ngandlela thile ukugcina iividiyo kuba zenziwe ukuba zibonwe kwisicelo ngokwaso, kodwa sisebenzisa amanyathelo ambalwa, sinokugcina naluphi na uhlobo lwevidiyo kwi-Instagram.
Le yindlela esiza kuyisebenzisa Isixhobo soHlola esinezikhangeli zeChannel (Google, Opera, Edge), kwaye uyakuthintela ukuvimba i-Instagram, kwaye unike iiakhawunti zakho iiwebhusayithi zomntu wesithathu, ukuthintela imiyalezo ecaphukisayo ukuba ingafikeleli kuwe.
Into esiza kuyenza kukungena ukuze ubone ividiyo ekufuneka siyikhuphile, kuya kufuneka sicofe kuyo ukuze siyibone kwi-FullScreen, okanye ucofe ekunene kwaye uvule kwenye ithebhu, ukufaka ithebhu ethile nevidiyo, kwaye uqale ividiyo ngokwakho.
Siza kucofa ekunene kwividiyo, kwaye sinike ithuba lokuHlola, sinokwenza indibaniselwano yebhodi yezitshixo Ctrl + Shift + I ngelixa ividiyo idlala.
Kwimenyu evula ngasekunene, siza kujonga i-tab ebizwa ngokuba yi "Elements" kwaye iyakusibonisa ikhowudi yephepha lewebhu, ungoyiki, ukufumana ividiyo kuya kuba lula kakhulu.
Kwi- "Elements" tab siza kunika indibaniselwano yebhodi yezitshixo Ctrl + F ukuvula ibhokisi yokukhangela, eya kuboniswa ngezantsi kwemenyu enekhowudi, kwaye apho siza kubhala .mp4 kwaye iya kusibonisa ikhonkco kwimenyu engentla. ngevidiyo, iphawulwe ngombala otyheli.
Ngokucofa ekunene kwikhonkco eliqaqanjisiweyo, siya kunika inketho ethi "Vula kwithebhu entsha", kwaye iya kuvula iwindow enevidiyo kuphela ekudlaleni.
Ngoku inyathelo lokugqibela iya kuba kukucofa ekunene kwividiyo, kwaye iyakusibonisa inketho entsha ebizwa ngokuba "Gcina iVidiyo njenge ...", siya kuyinika olu khetho, sibeka igama esilifunayo, apho liya kuba khona igcinwe, kwaye ukhuphelo luya kukhutshelwa kukhethwe ividiyo ekhethiweyo.
Ngoku ividiyo iya kuba kwiPC yakho kwaye ungayigcina ukuze ukwazi ukwabelana ngayo kwiinethiwekhi zentlalo ngendlela elula.
Khuphela iividiyo ze-Instagram kwi-smartphone yakho.
Ukuba ukhetha ukuba neevidiyo zakho kwiselfowuniKuya kufuneka ubhenele kwizicelo ezithile zezi, enye yezona zaziwa kakhulu kwaye zilula kakhulu "kukukhuphela i-Instagram" esi sicelo siza kukuvumela ukuba ukhuphele zombini iividiyo kunye nemifanekiso evela kwi-Instagram, kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Kuya kufuneka ufumane umxholo ofuna ukuwugcina, wakuba ufumanekile, siza kwabelana ngevidiyo ngekhonkco.
Nje ukuba ikhonkco likhutshelwe, siya kwiSicelo esikhutshelweyo, kwimeko yethu "Umkhupheli we-Instagram" kwaye siya kunamathisela ikhonkco esilifumeneyo
Siza kufumana iqhosha lokukhuphela, siya kulikhetha kwaye siya kuba nakho ukukhuphela ngeendlela ezahlukeneyo, ividiyo epheleleyo, umfanekiso wevidiyo, kwaye siphinde sishicilele ividiyo yoqobo kwiinethiwekhi zethu zentlalo.
Ngale ndlela sinokuba neevidiyo kwezi zixhobo kwaye sikwazi ukuzibukela ngaphandle kweengxaki nanini na xa sifuna, ngaphandle kokungena kupapasho loqobo, okanye ukubukela ngaphandle kwe-intanethi.
1 Khuphela iividiyo ze-Instagram kwiPC
2 Khuphela iividiyo ze-Instagram kwi-smartphone yakho.
Ungazikhuphela njani iividiyo kwitwitch?